I Izitimela ZaseSwitzerland, SBB, yinkampani kazwelonke yezitimela esebenza eSwitzerland.
Izitimela ze-SBB zibalwa phezulu ezinhlelweni zikazwelonke zezitimela eYurophu, futhi 2017 ibekwe kuqala ngekhwalithi yenkonzo yayo, simo sokuphepha, nenkomba yokusebenza.
I-SBB inayo 3 izilimi ezisemthethweni: German, French, nesiNtaliyane. Ngakho-ke, Iziteshi zezitimela ze-SBB ziqanjwa amagama futhi zimakwe ngokuhambisana nendawo: amagama eziteshi nezimpawu emadolobheni akhuluma izilimi ezimbili kukhona ngazo zombili izilimi zendawo, nokuthi kungani ungabona igama kwesinye isikhathi kanjena I-SBB CFF FFS.
Izitimela ze-SBB zifunwa kakhulu, futhi kuphela 2 ezinye izinkampani zesitimela njengomncintiswano, njengamanje zihlala ziyikhethelo eliphakeme lezitimela eSwitzerland. Bangakwazi ukubeka imikhawulo yamathikithi esitimela efana naleyo abanayo evimbela ukushintshwa kwamathikithi noma ukubuyiselwa kwemali ngaphandle kokuthi kuwuhlobo lwebhizinisi lethikithi. Noma kusekhona amawebhusayithi lapho ungathengisela khona amathikithi akho isandla sesibili kubantu, I-SBB ayikuvumeli ukuthengiswa kwamathikithi angamasekeni. Lokhu kukusiza kanjani ukonga imali? Oda ithikithi lakho kuphela uma uqiniseka ukuthi uhlelo lwakho luzokusindisa ekubhukeni ithikithi elilodwa kabili ngoba kukhona okuqhamile futhi awukwazi ukusebenzisa ithikithi lokuqala.
1) Ufika e Isikhungo sedolobha. Lokhu kungenye yezitimela ze-SBB uma kuqhathaniswa nezindiza. Izitimela ze-SBB nakho konke okunye ukuhamba ngesitimela kusuka noma yikuphi edolobheni kuya enkabeni yedolobha elilandelayo, doesn’t matter if it is a isiqiwu semvelo noma isigodi. Kuyakongela isikhathi kanye nezindleko ze-cab kusuka esikhumulweni sezindiza ukuya enkabeni yedolobha. Ngezitimela, Kulula ukufika kunoma yiliphi idolobha oqonde kulo. Akukhathalekile ukuthi usukaphi, Geneva, Basel, Zermatt, noma iZurich, Izikhungo zamadolobha ziyinzuzo enkulu yezitimela ze-SBB!
Uma 25 kumayelana nokuzijabulisa, futhi manje unekhadi elingu-seven25, ungahamba ungenamkhawulo kusuka ku- 7 pm. Okushoyo, Leli khadi lokuhamba livumeleke phakathi 7 pm it 5 am. Ngakho, isebenza kanjani? I-seven25 ilayishwe ekhadini lakho lokuhamba laseSwitzerland Pass futhi ungalisebenzisela noma ikuphi ukuma.
Ukuthola i-SBB yakho futhi ube nesikhathi esifanele, ujantshi utusa ukuthi ufike okungenani 1 ihora ngaphambi kokuba isitimela sakho se-SBB sihambe. Thina kwaSave A Train kwazise sihambe kakhulu ezitimeleni zeSBB, batusa ukufika ngisho 30 imizuzu kusengaphambili, ngakho-ke awudingi ukushesha udlule eziteshini ezinkulu zezitimela ukubamba isitimela. Ngaphezu kwalokho, ihora lanele isikhathi esanele sokujabulela izitolo nezitendi zokudla bese uthola lezo zinto ozidingayo uhambo lwesitimela ukuze lubushelelezi ngangokunokwenzeka.
Basel Isiteshi se-SBB yisiteshi esikhulu somngcele eYurophu. Lokho kusho ukuthi Kusuka eSwitzerland, ungaya eJalimane, France, Austria, kanye neNetherlands ngensizakalo yesitimela se-SBB. Okubaluleke kakhulu, bangu 50 izitolo nezindawo zokudlela esiteshini saseBasel, lapho ungathenga khona konke okudingayo ohambweni. Ngokwesibonelo, ungathenga ukudla okulula nezikhumbuzo zomzuzu wokugcina. Kusuka esiteshini seBasel SBB, neziteshi ezinkulu ongazihambela ziyiFrankfurt, Paris, naseSalzburg.
Wena can gcina esitimeleni a ngiyazingesikhathi ngaphambili kuze kufike ku- 5 abagibeli ngentengo ye- € 5 isihlalo ngasinye. Nokho, ukubhuka kumele kube ngaphansi kwegama lomuntu ohambayo.